Modely ravin-taratasy notapahana fiarakodia ho an'ny fametahana sy fametahana
Modely takelaka fanapahana fiaran'ny polisy
Fiara polisy polisy manao asa-tanana mba handokoana ny tenanao
Amin'ity modely ity dia azonao atao ny manapaka, mamoritra ary mametaka motera mpamono afo. Ny hany ilainao dia ny taratasy, hety ary hazo lakaoly. Ary faharetana kely amin'ny asa-tanana.
Taratasy tapaka fanapahana fiaran'ny polisy
Manoro hevitra izahay ny hampiasa taratasy somary matevina ho ravin-kazo hanamboarana fiaran'ny polisy. Ny tsindry iray amin'ny sary dia manokatra ilay kamio polisy modely hamolavola ny tenanao amin'ny endrika pdf:
Fiara polisy polisy aforeto - ravin-taratasy notapahana
Raha te handoko ny kamiao mpamono afo anao ianao dia ataovy amin'ny môdely vita pirinty alohan'ny hamonoanao ny mpamono afo. Tsindrio iray manokatra ny modely amin'ny endrika pdf:
Fiara polisy modely handokoana sy handinianao tena
Teny lakile fanampiny: ravina aforitra, ravina aforitra
Modely ravin-tinker vita amin'ny asa tanana vita amin'ny taratasy
Modely ravin-taratasy fanapahana kamiao
Modely ravin-taratasy asa-tanana